Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Rehefa tsy mahay dia esory
Politika : Rehefa tsy mahay dia esory
Fa inona no mbola itazonan’ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny tale jeneralin’ny Jirama eo amin’io toerana io ?
Rehefa tsy mahay dia tokony ho roahina avy hatrany fa tsy anaovana toram-po toa izao. Sa ve misy fifanarahana miafina nifanaovana amin’ity olona efa manakorontana ny fanjakana ity ? Efa niarahana nahita tamin’ny haino aman-jery samihafa ny raharaha. Tany Fianarantsoa sy ny faritra maro no efa nahitana fandaniam-bola tsy amin’antony natao tany amin’ny hôtely. Olana tsy misy fiafarany ny mahakasika ny delestazy manerana an’i Madagasikara. Tsy tenenina intsony ny olana amin’ny rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy hatramin’izao. Ankehitriny dia io iarahana mahita io ny olana goavana mikasika ny faktiora ao amin’ny jirama fa manao izay hampirotaka ny vahoaka koa. Mitaraina ny mpanjifa jiro eran’i Madagasikara ankehitriny fa nitombo avo teloheny amin’ny fandoa isam-bolana ny jiro. Dia lazaina sy anaovana filazana an-gazety fa ahena ny vidin-jiro. Tezitra ny vahoaka ary miapanga ny fanjakana ho tsy miraharaha azy intsony.
Ireo rehetra ireo miaraka amin’ny zavatra maro no tsy mandeha ao amin’ny Jirama izay tantanin’ingahy tale Jeneraly Vonjy Andriamanga. Dia mahagaga fa mbola tazonin’ny fanjakana Andry Nirina Rajoelina izy. Fanapotehina ny politikam-panjakana mihitsy nefa no efa ataon’ity olona ity.
Izahay teto amin’ny La Gazette De La Grande Ile dia efa iray taona izao no nilaza tsy ankijanona fa tsy mamely ity olona ity nefa tsy nohenoina. Vokatr’izany dia izao iarahana mahita izao fa mikorontana tanteraka ny fitantanana ny JIRAMA ity sy ny firenena noho ny nataony.
Tsy ingahy Vonjy Andriamanga ihany no tsy mamely fa ny minisitry ny harena ankibon’ny tany ingahy Fidiniavo Ravokatra. Iarahana mahita fa tsy voafehin’ity olona ity ny fitantanana ity sehatra ity. Ny fanjakana mihitsy no nilaza fa misy volamena mivoaka an-tsokosoko eto Madagasikara noho ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany tsy hay ny manaramaso azy na iraisana tsikombakomba amin’ireo mpitrandraka tsy ara-dalana. Voalaza fa 10 taonina no volamena hita any ivelany avy aty Madagasikara araka ny vaovao ofisialy nefa tsy fantatrin’ny fanjakana akory ny fisiany. Taorianan’io dia ny raharaha volamena 73Kg mahery tratra tany Afrika atsimo. Sady tokony hoesorina tsy misy hatakandro toa ny raharaha ny minisitry ny fampianarana tamin’ny resaka “bonbon sucette” ka nanesorana ny minisitra Rijasoa Andriamanana sy ny minisitra Thérèse Volahaingo tamin’ny resaka “panier garnis” ireo olona ireo.
Mbola tsy mahavita ny andraikiny koa ny minisitry ny fitaterana Joel Randriamandranto izay tsy afaka mifehy ny fitaterana eto Madagasikara. Tafaporitsaka foana ny harena ankibon’ny tany eto Madagasikara mankany ivelany ka ny firenena ivelan’i Madagasikara indray no mampandre ny firenena Malagasy. Tena mahamenatra sy manala baraka ny filazana fa tsy mahavita azy isika amin’izany rehetra izany.
Dia mahagaga fa mbola tazonin’ny fanjakana eo ihany ireo olona ireo. Ny raharaha toa izao dia tsy tokony hanaovana indrafo mihitsy. Tokony mbola hanaovana fanadihadiana any amin’ny PAC(fitsarana miady amin’ny kolikoly) koa azy izy ireny fa manana endrika kolikoly ny raharaha toa izao.
Inona no mbola mampisalasala an’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny praiminisitra Ntsay Christian amin’ny fanesorana ny olona toa ireny?